Shiinaha Dhaqaalaha Ultrasonic Tube Filler Iyo Sealer HX-002 warshad iyo shirkado | Mashiinka HX
Koronto AC220V / 110V 1PH 50 / 60HZ
Buuxinta Range J: 6-60ml B: 10-120ml C: 25-250ml D: 50-500ml
(waxay ku dooran kartaa iyadoo lagu saleynayo mugga macaamiisha)
Awood 6-12pcs / min
Daweynta Dia. 13-50mm
Dhererka Tubada 50-200mm
Cabbir L860 * W670 * 1570mm
Miisaanka saafiga ah 180kgs
* Naqshadeynta isafgarad, oo leh buuxinta iyo daboolida waxqabadka hal mid, oo aad ugu haboon soo saarayaasha bilowga, tijaabada suuqa, ama shaybaarka cadeynta shaybaarka.
* Adiga oo gacanta ku quudiyo tuubada, riix batoonka bilowga, mashiinku si otomaatig ah ayuu u aqoonsan karaa calaamadda diiwaangelinta, buuxinta, ku xiridda koodh, goynta dhammaadka.
* Wuxuu korsadaa tiknoolajiyada wax lagu xiro ee loo yaqaan 'ultrasonic sealing technology', looma baahna waqti diirimaad, xasilooni iyo xasillooni hagaagsan, dhalanrog lahayn iyo diidmo hooseysa oo ka yar 1%.
* Independent R & D loogu talagalay dijitaalka dijitaalka ah ee kumbuyuutarka dijital ah ee sanduuqa xakamaynta korantada, looma baahna in buuggu hagaajiyo soo noqnoqoshada, iyadoo la adeegsanayo awoodda magdhawga otomaatiga, iyadoo laga fogaanayo yareynta awoodda ka dib isticmaalka muddada dheer. Si xor ah ayuu u hagaajin karaa awoodda ku saleysan qalabka tuubbada iyo cabbirka, xasilloonida iyo ugu yaraan heerka cilladda, kordhin kara muddada nolosha marka loo eego sanduuqa korantada ee caadiga ah.
* PLC oo leh nidaamka xakamaynta shaashadda taabashada, oo bixisa khibrad hawlgal saaxiibtinimo.
* Tallaabo kasta waxaa lagu xakamayn karaa si madax-bannaan shaashadda taabashada, oo saaxiibtinimo u leh hagaajinta u dhexeysa tuubooyinka kala duwan. Shaqaaluhu waxay isticmaali karaan hal tuubo oo kaliya si ay u dejiyaan dhammaan jagooyinka, iyagoo keydsanaya waqti badan iyo qalab.
* Iyadoo lugta lugta ay ku shaqeyneyso buuxinta shaqada kaligeed.
* "Panasonic" dareemayaal xasaasi ah oo sareeya oo wata mootada jaranjarada, ayaa si sax ah ula socon kara calaamada diiwaangelinta.
* Ku qalabaysan filler loogu talagalay labada dareeraha iyo kareemka, oo leh dulqaad buuxinaya within 1%. Buuxinta mugga lagu hagaajin karo shaagagga.
* Waxay ka sameysan tahay 304 ahama, asiidh iyo u adkeysiga alkali, u adkaysiga daxalka.
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay cuntada, dawooyinka, qurxinta, kiimikada iyo caag kale, PE, aluminium aluminium buuxinta iyo daboolida.
1. Hopper jaakad laba jibbaarane leh kululaynta iyo shaqada kicinta
Hore: Nooca Rotary Buuxinta iyo Mashiinka Mashiinka HX-006FC
Xiga: Semi-auto Ultrasonic Tube Filler Iyo Sealer HX-006
Filter otomaatiga ah iyo badeecada
Mashiinka Tuulada Balaastikada ah Iyo Sumeeyaha
Tube Filler Oo Sifeeyaha